သတ်တုတှငျး(၂) ညှနျကွားရေးမှူး အပါအဝငျ ဝနျထမျး ၄ ဦးကို အဂတိအမှုနဲ့ အရေးယူ – Voice of Myanmar
သတ်တုတှငျး(၂) ညှနျကွားရေးမှူး အပါအဝငျ ဝနျထမျး ၄ ဦးကို အဂတိအမှုနဲ့ အရေးယူ
ဟုမ်မလငျး ၊ သွဂုတျ ၂၂ – ၂၀၂၀
စဈကိုငျးတိုငျး သတ်တုတှငျးဦးစီးဌာန(၂)မှာ ညှနျကွားရေးမှူးအဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျနသေူတဈဦး အပါအဝငျ ဌာနဆိုငျရာ ဝနျထမျး ၄ ယောကျကို မွနျမာနိုငျငံအဂတိလိုကျစားမှု တိုကျဖကျြရေးကျောမရှငျက အမှုဖှငျ့အရေးယူလိုကျတယျလို့ သိရပါတယျ။
“ ရဲစခနျးမှူးဟောငျး နုတျထှကျသှားပွီးဖွဈတဲ့ ရဲအုပျ မြိုးမငျးညှနျ့ နဲ့ သတ်တုတှငျးက ဦးအောငျနိုငျကို မိုငျးကိုငျးနယျမွရေဲစခနျးမှာ ၂၀.၈. ၂၀၂၀ ရကျနကေ့ အဂတိမှု နှဈမှုနဲ့ အမှုဖှငျ့ထားတယျ၊ ဟုမ်မလငျးမွို့မရဲစခနျးမှာလညျး အမှုဖှငျ့ထားတာရှိသေးတယျ ”လို့ ဟုမ်မလငျးမွို့နယျ၊ နမျ့တောကြေးရှာက ရှလေုပျငနျးရှငျတဈဦးက ပွောပါတယျ။
ရှလေုပျငနျးရှငျ နဈနာသူတှရေဲ့ တငျပွတိုငျတနျးစာအရ မွနျမာနိုငျငံ အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေးအဖှဲ့ က စဈဆေးဆောငျရှကျရာမှာ စဈကိုငျးတိုငျး သတ်တုတှငျး ဦးစီးဌာန မုံရှာရုံးခှဲက ညှနျကွားရေးမှူး ဦးအောငျနိုငျဟာ ရှမြှေောလုပျကှကျ လုပျကိုငျခှငျ့ခထြားပေးရာမှာ လုပျပိုငျခှငျ့ရှိသူတဈယောကျဖွဈတယျလို့ ပွောဆိုပွီး ရှလေုပျကှကျ လြှောကျထားတဲ့ ကုမ်မဏီဆီကနေ ငှကေပျြ သိနျး(၄၀)ကို လကျခံရယူခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အမှတျ(၂) သတ်တုတှငျးလုပျငနျး(မုံရှာ)မှာ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဒုတိယမနျနဂြော ဦးလငျးထငျဆိုသူကလညျး ရှမြှေောလုပျကိုငျတဲ့ ကုမ်မဏီတဈခုဆီက ငှကေပျြ (၂၀၃) သိနျးကို ရယူခဲ့တာဖွဈပွီး ဟုမ်မလငျးမွို့ နယျ၊ မိုငျးကိုငျးနယျမွရေဲစခနျးမှာ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက စခနျးမှူး တာဝနျထမျးဆောငျခဲ့သူ ရဲအုပျ မြိုးမငျးညှနျ့ ( အခုနှုတျထှကျပွီး)သူကလညျး စခနျးမှူး တာဝနျထမျးဆောငျနခြေိနျ ရှမြှေောလုပျကှကျတဈခုမှာ ရှမြှေောမောငျးနတေဲ့ လူသုံး ယောကျဆီကနေ ငှကေပျြ သိနျး(၅၀) နဲ့ ရှမြှေောပိလို့ လူတယောကျသဆေုံးတဲ့ အမှုမှာ ရှလေုပျကှကျ ပိုငျရှငျဆီကနေ ငှကေပျြသိနျး(၅၀) ကို တောငျးယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အခုလို ငှကွေေးတောငျးယူခဲ့ကွတာဟာ ရာထူးတာဝနျကို အလှဲသုံးစားပွုခဲ့တဲ့အတှကျ
ညှနျကွားရေးမှူး ဦးအောငျနိုငျနဲ့ ရဲစခနျးမှူးဟောငျး ရဲအုပျ မြိုးမငျးညှနျ့ တို့နှဈယောကျကို မိုငျးကိုငျးနယျမွရေဲစခနျးမှာ အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒအေရ အမှုဖှငျ့အရေးယူခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဟုမ်မလငျးမွို့နယျ အထှထှေအေုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာနမှာ အကွီးတနျးစာရေး တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ ဒျေါရှုရှုယဉျဟာ ဟုမ်မလငျးမွို့နယျ လယျယာမွစေီမံခနျ့ခှဲရေးနဲ့ စာရငျးအငျးဦးစီးဌာန မွို့နယျမွစောရငျး ဦးစီးမှူးရုံးမှာ မွတေိုငျး – ၄ တာဝနျကို ထမျးဆောငျနတေဲ့ ဦးစိုးမိုးအောငျဆီကနေ မွို့နယျစီမံခနျ့ခှဲရေးကျောမတီရုံးက အသေးစား ရှလေုပျကှကျ လြှောကျထားခွငျးအပျေါ ထောကျခံစာရရှိရေးအတှကျ ငှကေပျြ သုံးသိနျး ငါးသောငျးကို တောငျးခံရယူခဲ့တယျလို့ စဈဆေးပျေါပေါကျခဲ့ပါတယျ။
မွို့နယျထှအေုပျစာရေး ဒျေါရှုရှုယဉျကို မွစောရငျးအမှုတှဲထိနျး မွတေိုငျး -၄ ဦးစိုးမိုးအောငျက ငှကေပျြ သုံးသိနျးငါးသောငျးပေးခဲ့တာဟာ အဂတိလိုကျစားမှုကြူးလှနျဖို့ အားပေးကူညီရာ ရောကျတာကွောငျ့ စုံးစမျးစဈဆေးရေးအဖှဲ့က ဒျေါရှုရှုယဉျကို အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒေ ပုဒျမ ၅၇ နဲ့အမှုဖှငျ့အရေးယူထားပွီး ဦးစိုးမိုးအောငျကိုတော့ အဂတိလိုကျစားမှုတိုကျဖကျြရေး ဥပဒပေုဒျမ ၅၇/ ၆၃ အရ အမှုဖှငျ့အရေးယူကာ စဈကိုငျးတိုငျး တရားလှတျတျောရုံးမှာ တရားစှဲဆိုနိုငျဖို့အတှကျ မုံရှာမွို့မရဲစခနျးမှာ ယာယီထိနျးသိမျးထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
သတ္တုတွင်း(၂) ညွှန်ကြားရေးမှူး အပါအ၀င် ၀န်ထမ်း ၄ ဦးကို အဂတိအမှုနဲ့ အရေးယူ
ဟုမ္မလင်း ၊ သြဂုတ် ၂၂ – ၂၀၂၀
စစ်ကိုင်းတိုင်း သတ္တုတွင်းဦးစီးဌာန(၂)မှာ ညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူတစ်ဦး အပါအ၀င် ဌာနဆိုင်ရာ ၀န်ထမ်း ၄ ယောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံအဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်က အမှုဖွင့်အရေးယူလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ ရဲစခန်းမှူးဟောင်း နုတ်ထွက်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ ရဲအုပ် မျိုးမင်းညွှန့် နဲ့ သတ္တုတွင်းက ဦးအောင်နိုင်ကို မိုင်းကိုင်းနယ်မြေရဲစခန်းမှာ ၂၀.၈. ၂၀၂၀ ရက်နေ့က အဂတိမှု နှစ်မှုနဲ့ အမှုဖွင့်ထားတယ်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့မရဲစခန်းမှာလည်း အမှုဖွင့်ထားတာရှိသေးတယ် ”လို့ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ နမ့်တောကျေးရွာက ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ရွှေလုပ်ငန်းရှင် နစ်နာသူတွေရဲ့ တင်ပြတိုင်တန်းစာအရ မြန်မာနိုင်ငံ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ က စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရာမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်း သတ္တုတွင်း ဦးစီးဌာန မုံရွာရုံးခွဲက ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဟာ ရွှေမျှောလုပ်ကွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်ချထားပေးရာမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုပြီး ရွှေလုပ်ကွက် လျှောက်ထားတဲ့ ကုမ္မဏီဆီကနေ ငွေကျပ် သိန်း(၄၀)ကို လက်ခံရယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်(၂) သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း(မုံရွာ)မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဒုတိယမန်နေဂျာ ဦးလင်းထင်ဆိုသူကလည်း ရွှေမျှောလုပ်ကိုင်တဲ့ ကုမ္မဏီတစ်ခုဆီက ငွေကျပ် (၂၀၃) သိန်းကို ရယူခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဟုမ္မလင်းမြို့ နယ်၊ မိုင်းကိုင်းနယ်မြေရဲစခန်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က စခန်းမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ ရဲအုပ် မျိုးမင်းညွှန့် ( အခုနှုတ်ထွက်ပြီး)သူကလည်း စခန်းမှူး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေချိန် ရွှေမျှောလုပ်ကွက်တစ်ခုမှာ ရွှေမျှောမောင်းနေတဲ့ လူသုံး ယောက်ဆီကနေ ငွေကျပ် သိန်း(၅၀) နဲ့ ရွှေမျှောပိလို့ လူတယောက်သေဆုံးတဲ့ အမှုမှာ ရွှေလုပ်ကွက် ပိုင်ရှင်ဆီကနေ ငွေကျပ်သိန်း(၅၀) ကို တောင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ငွေကြေးတောင်းယူခဲ့ကြတာဟာ ရာထူးတာဝန်ကို အလွဲသုံးစားပြုခဲ့တဲ့အတွက်
ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်နဲ့ ရဲစခန်းမှူးဟောင်း ရဲအုပ် မျိုးမင်းညွှန့် တို့နှစ်ယောက်ကို မိုင်းကိုင်းနယ်မြေရဲစခန်းမှာ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေအရ အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှာ အကြီးတန်းစာရေး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဒေါ်ရှုရှုယဉ်ဟာ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန မြို့နယ်မြေစာရင်း ဦးစီးမှူးရုံးမှာ မြေတိုင်း – ၄ တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဦးစိုးမိုးအောင်ဆီကနေ မြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီရုံးက အသေးစား ရွှေလုပ်ကွက် လျှောက်ထားခြင်းအပေါ် ထောက်ခံစာရရှိရေးအတွက် ငွေကျပ် သုံးသိန်း ငါးသောင်းကို တောင်းခံရယူခဲ့တယ်လို့ စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
မြို့နယ်ထွေအုပ်စာရေး ဒေါ်ရှုရှုယဉ်ကို မြေစာရင်းအမှုတွဲထိန်း မြေတိုင်း -၄ ဦးစိုးမိုးအောင်က ငွေကျပ် သုံးသိန်းငါးသောင်းပေးခဲ့တာဟာ အဂတိလိုက်စားမှုကျူးလွန်ဖို့ အားပေးကူညီရာ ရောက်တာကြောင့် စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က ဒေါ်ရှုရှုယဉ်ကို အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၇ နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူထားပြီး ဦးစိုးမိုးအောင်ကိုတော့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၅၇/ ၆၃ အရ အမှုဖွင့်အရေးယူကာ စစ်ကိုင်းတိုင်း တရားလွှတ်တော်ရုံးမှာ တရားစွဲဆိုနိုင်ဖို့အတွက် မုံရွာမြို့မရဲစခန်းမှာ ယာယီထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။